Bid Wars: Pawn Empire 1.13.1 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 1.13.1 လြန္ခဲ့ေသာ3လက
ဂိမ္းမ်ား နည္းဗ်ဴဟာ Bid Wars: Pawn Empire
Bid Wars: Pawn Empire ၏ ေဖာ္ျပခ်က္
သိုလှောင်မှုလေလံအပေါ်လေလံ, ငွေရှာဖို့အလွန်ကောင်းသောလမ်းသင်သည်သင်၏ကံနှင့်ဗီဇအတိုင်းစမ်းသပ်ဖို့မကြောက်နေလျှင်, ထိုဖြစ်ပါတယ်။ ပြည့် High-လောင်းကြေး Go သင့်ရဲ့ပြိုင်ဘက် outbid နှင့်သင့်ကိုယ်ပိုင်ပေါင်ဆိုင်၌သင်တို့၏အဖိုးတန်ရင်နှီးမြှုပ်နှံမှုများရောင်းချနေခြင်းဖြင့်အမြတ်လှည့်။ သင်တို့သည်နောက်ကာလ၌ငွေရတတ်သောသူနှင့်အစွမ်းထက်ဖြစ်လိမ့်မယ်!
သင့်ရဲ့စမတ်အပေးအယူကနေ💸PROFITနှင့်သင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကိုချဲ့ထွင်ခြင်းနှင့် ပို. ပင်ငွေရှာဖို့မြို့မှာအသစ်ကအဆောက်အဦးများသော့ဖွင့်!
အစွန်း-of သင့်ရဲ့-ထိုင်ခုံသိုလှောင်မှုလေလံ၌သင်တို့၏ပြိုင်ဆိုင်မှု💸OUTBID။ သင်ရွေးချယ်အဖြစ်ပြင်းထန်သောဂိမ်းခံစားခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာနှင့်ပိုမြန်လောကီနိုင်ငံအရပ်ရပ်ရှိသမျှကျော်လေလံ၌သင်တို့၏ပြိုင်ဘက်ထက်လေလံဆွဲ!
သင့်ကိုယ်ပိုင်ပေါင်ဆိုင်💸RUNနှင့်သင့်ရှားပါးအဖိုးတန်ရင်နှီးမြှုပ်နှံမှုများကိုဖော်ပြရန်။ ဖောက်သည်များကသင်၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအပေါ်ပိုက်ဆံဖြုန်းဖို့လောကီနိုင်ငံအရပ်ရပ်ရှိသမျှကျော်ထံမှလာနှင့်သင်ကြွယ်ဝသောလုပ် Make!
တစ်မြို့-ကျယ်ပြန့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအင်ပါယာသို့သင့်ရဲ့ rundown မိသားစုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းကိုဖွင့်ရန်သင့်ရှာပုံတော်အပေါ်ထိတွေ့ဆက်ဆံဇာတ်ကောင်နဲ့ချုပ်ကိုင်ထားပုံပြင်မှတဆင့်💸LIVE!
နေ့စဉ်လေလံအတွက်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကို ယူ. လေလံဆွဲရန်တစ်ခုတည်းသောအခွင့်အလမ်းကိုလက်လွတ်မကဤအောက်ဟောင်းကားဂိုဒေါင်အချို့သင့်ရဲ့ရလဒ်တွေအိပ်မက်ကျော်လွန်ဘဏ္ဍာကိုဖုံးကွယ်! သင့်ရဲ့ကံကိုစမ်းကြည့်ပါ, ဒါပေမယ့်ကိုယ့်စိတ်ထဲကလျစ်လျူရှုဘယ်တော့မှ: သူတို့တစ်တွေလေလံရဲ့အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်သို့မဟုတ်ခြိုးဖကျြနိုငျသညျ!
တစ်ဦးမြင့်တက်ကြယ်ပွင့်ဖြစ်လာသငျသညျပိုကြီးလေလံအတွက်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းယူနှင့်ကောင်းမကောင်းအာရုံစူးစိုက်မှုနှင့်အတူကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းသကဲ့သို့သငျရပါလိမ့်မယ်: အချို့သောကြီးမားသောပေါင်ဆိုင်လုပ်ငန်းရှင်ကြီးသင့်လုပ်ငန်းကိုကိုယ်စားပြုယှဉ်ပြိုင်ကြိုက်နှစ်သက်မပြုစေခြင်းငှါ, သူတို့သည်သင်၏အဟနျ့တားဖို့အားလုံးကိုမှတ်တိုင်များဆွဲထုတ်ပါလိမ့်မယ် လမ်းကြောင်း! ထိုကဲ့သို့သောပြဿနာများသင်သည်ငွေရတတ်သောသူနှင့်နာမည်ဆိုးဖြင့်ကျော်ကြားလာတဲ့အခါနယ်မြေနှင့်အတူ လာ. ဒါကြောင့်နှင့်အတူကိုင်တွယ်ရန်ပြင်ဆင်!
သင့်ရဲ့ပေါင်အင်ပါယာယခု Start နဲ့လေလံဆွဲရန်အဆင်သင့်ဖြစ်နေရ!
ကျေးဇူးပြုပြီးမှတ်သားထားပါ! ဒီဂိမ်းကစားရန်အခမဲ့ဖြစ်ပါသည်, သို့သော်အမှန်တကယ်ငွေဝယ်ယူနိုင်ပါသည်ပစ္စည်းများပါဝင်သည်။ ဖော်ပြချက်ထဲတွင်ဖော်ပြခဲ့တဲ့အချို့အင်္ဂါရပ်များနှင့် extras လည်းအမှန်တကယ်ငွေဝယ်ယူခံရဖို့ရှိသည်လိမ့်မည်။
Bid Wars: Pawn Empire အတြက္ အသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
Bid Wars: Pawn Empire အေပၚ ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈမ်ား
Bid Wars: Pawn Empire အေပၚတြင္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးမႈ မရွိပါ။ ပထမဆံုး ျပဳလုပ္လိုက္ပါ!
Bid Wars: Pawn Empire အား အခ်က္ျပပါ
makelliott စတိုး 25 24.73k
Bid Wars: Pawn Empire ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ
APK အေၾကာင္း Bid Wars: Pawn Empire အခ်က္အလက္
APK ဗားရွင္း 1.13.1
ထုတ်လုပ်သူ Tapps Games
ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု မူဝါဒ http://pp.tappsgames.com/?app=br.com.tapps.bidwars2
App Name: Bid Wars: Pawn Empire
Release date: 2019-05-09 12:58:36
လက်မှတ် SHA1: 77:53:F2:82:DE:19:2B:10:5B:5B:AD:C6:E4:14:FA:9F:12:1D:A9:CE
ထုတ်လုပ်သူ (CN): Flavio Miyamaru
အဖွဲ့အစည်း (O): Tapps
နယ်မြေ (L): SÆo Paulo
နိုင်ငံ (C): SP
ပြည်နယ်/မြို့တော် (ST): SÆo Paulo
Bid Wars: Pawn Empire APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ